सौगात सृष्टि सम्बन्ध, प्रेम फाप्यो सिनेमा फापेन ?? « Mazzako Online
सौगात सृष्टि सम्बन्ध, प्रेम फाप्यो सिनेमा फापेन ??
नायक सौगात मल्ल र नायिका सृस्‍टि श्रेष्ठ प्रेममा रहेको जानकारी प्राय: सबैमा छ। उनिहरुले खुलेर नै आफ्नो प्रेम जीवनको बारेमा बोल्दै आएका पनि छन्। उनिहरु प्रेममा रहेपछी उनिहरुको चलचित्रको भन्दा अफेयरकै चर्चा ज्यादा रह्यो।
करिब लामो समय देखी प्रेममा रहेक यि जोडीले चलचित्रमा सङै काम पनि गरेका छन्। उनिहरु अभिनित चलचित्र ‘मासुभात’ चाँडै नै प्रदर्शनमा आउँदै छ। फेरी पनि यि दुई शिशिर राणाको चलचित्र ‘पोइ पर्‍यो काले’मा काम गर्दै छन्।
सौगात मल्ल कुनै बेला अत्याधिक रुचाईएका नायक हुन् तर सृष्टि सँगको प्रेम चर्चा सँगै उनको चर्चामा पनि कमी आयो। फिल्मका अफर पनि निकै कम आएको कुरा छ र उनले हरेक फिल्ममा सृस्‍टि लाईनै शिफारिस गर्ने गरेको सुनिएको छ।
यसै करणले पनि सौगातले कम चलचित्र पाएको र सृष्टिले धेरै चलचित्रमा काम पाएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा सौगात सँगको प्रेम सृष्टिलाई निकै फापेको देखिन्छ र सृष्टिसँगको प्रेम सौगातको फिल्मी करीयरमा बाधा भएको भान हुन्छ।
आफ्नो सम्बन्ध विवाह सम्म पुग्नेमा ढुक्क सौगात र सृष्टिले प्रेम सँगसँगै फिल्मलाई पनि प्रेम गरे आफ्नो कर्म र करियरलाई प्लस पोइन्ट हुन्थ्यो कि ?